:: My Little World ::: ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်
Posted by Nay Nay Naing at 6/21/2007 09:35:00 PM
mae ti la chin woot par lar :P
ဘာလို့မယ်သီလရှင် ၀တ်ရမှာလဲ.. :O ငါ့ကို ပြောချင်တာလား။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဒါမှ မဟုတ် တခြားသူကို ပြောတာလား.. ဘယ်သူကို ဘာကြောင့် အဲ့လို ပြောတာလဲ..
နင်ရေးထားတာ ဖတ်ပြီး ငါပိုစ့်ကို ငါအသေအချာ ထပ်ဖတ်ကြည့်ရသေးတယ်.
ပိုင်သူ.. နင် ငါရေးထားတာကို အသေအချာရော ဖတ်ရဲ့လား.. မြင်ရဲ့လား.. ငါ မြန်မာလို ရေးထားတာပါဟာ.. ရေးထားတာလည်း ရှင်းရှင်းလေးပါ။ နောင်ဆို မြန်မာစာဖတ်နည်း သင်တန်းဆိုတာမျိုးပေါ်လာရင် နင် အရင်ဆုံး သွားတတ်ရမယ် ထင်တယ်... ဒါမှမဟုတ် Game တွေ ဆော့တာများနေပြီး မျက်လုံးတွေက စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်း မမြင်တော့တာလား မသိဘူး..
Thursday, June 21, 2007 10:23:00 PM
Monday, June 25, 2007 2:45:00 AM
ဒီ ကဗျာလေးကြိုက်တယ်တဲ့လားး :P.. ဘယ်အချိန်မှာများ Invitation Letter ရောက်လာလေမလဲဆိုပြီး စောင့်နေပါတယ်။
စိတ်တစ်မျိုးပြောင်းချင်လာတော့ တစ်မျိုးကောင်းတာပေါ့.. :P
ဒါနဲ့ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုများ ခေါင်းစဉ်တပ်ခံရမှာပါလိမ့်. စိတ်ဝင်စားသွားပြီ.. :D
Sure sooner or later :D